KANDIDA ROBIMANANA ORLANDO – LAHARANA 35
FARADOKA TEO AMIN’NY KIANJAN’NY DEMOKRASIA AMBOHIJATOVO
Lahatsoratra sy sary : Nanouh
Teo amin’ny kianjan’ny Demokrasia Ambohijatovo no nosafidian’ny Kandida laharana 35, Robimanana Orlando, hanatanterahana ny faradoboka tamin’ny fampielezan-kevitra ho an’ny vahoaka an’Antananarivo, ny Sabotsy 03 Novambra 2018 teo. Mialohan’ny niakarany teo Ambohijatovo dia mbola nanao fitsidihana tany amin’iny Faritra Itasy iny ny tenany sy ny mpanara-dia azy. Mbola nanohy ny fampilezan-keviny any amin’iny Faritra Atsimon’ny Nosy iny moa ny Kandidà Robimanana Orlando, nanomboka ny Alahady 04 Novambra.
Tsy mba notambazana vola, na fitafiana, na fiarabe fitaterana, toy ny an’ireo kandidà maro ireo olona mpanohana ity kandidà ity, kanefa dia samy tonga teny an-toerana tamin’ny herin’ny tenany avy sy niandry tamim-pilaminana sy fahatoniana ny fahatongavan’ny kandidà Robimanana Orlando. Nisy kosa anefa ny fandraisan’ireo mpanakanto maro anjara tamin’io andro io, izay nahafan’ny rehetra niala voly.
Anisan’ny tanjon’ny kandidà Robimanana Orlando ny hanala ny vesatra mianjady amin’ny vahoaka Malagasy. Manana ny fahaiza-manao sy ny programan’asa matipaika hanatanterahana izany indrindra ny tenany.
Ny fitiavana-tena, ny fitiavam-bola, ny fitiavam-pahefana no anisan’ny mampahantra ny vahoaka. Maro anefa ireo mpitondra no tsy mijery afa-tsy ny tombontsoan’ny tenany rehefa tonga eo amin’ny toerana nametrahan’ny vahoka azy. “Efa niaina ny fijalian’ny vahoaka aho, satria nivoaka tamin’ny fianakaviana antonony... Araka izany, tsy handiso fanantenana ny vahoaka aho satria efa niaina ny fijaliana niaian’izy ireo ihany koa…Na tafita aza aho dia tsy hanadino ireo vahoaka madinika nifampikasoka tamiko”, hoy ny kandida 35, Robimanana Orlando, tamin’ny lahateny nataony.
Mila olona vaovao
Mila olona vaovao hitantana azy ity firenena ity : olona madio ara-politika, tsy mbola nitondra fanjakana, tsy manao fampanantenana paokaty. Olona mijoro amin’ny fahamarinana, sahy mamaky ady amin’ny kolikoly. Olona tanora, manam-pahaizana sy manana traikefa amin’ny fitantanana. Olona matahotra an’Andriamanitra ary olona manana vina sy programa matotra sy tsara rindra.
Ny kandidà Robimnana Orlando, laharana 35 no manana ireo toetoetra ilain’ny olona tokony hitondra ny firenena ireo.
Teny am-pamaranana ny lahateneniny teny Ambohijatovo dia nametraka hafatra ho an’ny vahoka Malagasy ny Kandidà Robimanana Orlando. “Raha tianao ny hanova ny tantaram-pirenena dia mandehana mifidy mba hisian’ny fiovana. Manome vahana ny teo aloha ny tsy fandehananao mifidy. Taomy ny olona hahay hisafidy, fa tsy ho voatambitambin’izay vola 5000 Ariary…”
Raha vonona ary ianao hanova izao fiainana sarotra sy fiainana anaty fijaliana izao dia FIDIO NY LAHARANA 35, ROBIMANANA ORLANDO, amin’ny Alarobia 07 Novambra izao.
Indro asehonay eto ambany ny sombintsombin'ireo sary nalainay teny an-toerana ny Sabotsy 03 Novambra teo.